Raharaha « 500 millions Ariary » : Tsy afa-bela i Orlando Robimanana -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha « 500 millions Ariary » : Tsy afa-bela i Orlando Robimanana
Nahagaga ny maro ny nahazoan’ i Orlando Robimanana, talen’ny Tahirimbolam-panjakana tamin’ny taona 2015 fahafahana vonjimaika tamin’ilay raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana mitentina 400 828 000 Ariary (500 millions Ariary latsaka kely), izay nandeha teny anivon’ny Fitsarana manokana misahana ny Kolikoly, na Cpac ny alarobia 21 marsa 2018 teo, kanefa dia izy izao no nanao sonia ny famoahana io volabe io. Toa tahaka ny miteny mantsy iny fanapahan-kevitra iny fa madio eo anatrehan’iny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana mahavoarohirohy azy sy ny minisitry ny Vola teo aloha Jean Razafindravonona, ary Claudine Razaimamonjy iny ny tenany.
Voarakitra anatin’ny dosie tonga eto am-pelatanan’ny mpanao gazety anefa, fa izy sy io minisitra teo aloha io no nanao sonia ny famoahana io vola io. Nisy ny “autorisation” na “fahazoan-dalana” mitondra ny datin’ny 05 janoary 2015, izay manome baiko ny Madame le Receveur Générale d’Antananarivo hamoaka io vola io tamin’izany, ka misy sonia sy fitomboky ny minisitry ny Vola ny Pr Jean Razafindravonona sy ny Tale jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana Robimanana Orlando .
Io fahazoan-dalana na “autorisation” io dia manome toromarika, handoavana ny faktiora laharana 012/2014 mikasika ny fanatsarana ny fotodrafitrasan’ny INTP eny Antanetibe Ivato. Porofo mitohoka amin’ny tendan’ingahy Orlando Robimanana io dosie io fa tena voasaringotra tanteraka ao anatin’ity raharaha ity ny tenany.
Tsy nivoaka mihitsy io volabe io raha tsy nanao sonia izany koa izy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe “koa satria ve vadina mpitsara ingahy Orlando Robimanana dia ireny hitantsika ireny ny vokatry ny fihainoana azy: fahafahana vonjimaika”. Misy mizana tsindrian’ila ao anatin’ity raharaha ity ka tokony haverin’ireo tompon’andraikitra jerena tsara. Tsy tokony ho hita ao anatin’ity raharaha ity intsony ny resaka “corporatisme”. Ady amin’ny kolikoly izy ity ka tokony hita taratra hatrany amin’ny fampiharana lalàna izany. Na vadina “magistrat” izy na iza dia tokony saziana araka ny heloka vitany rehefa voaporofo izany.
Tamin’izany fotoana izany dia tsy mbola nikasa ny ho kandidà mihitsy Orlando Robimanana. Noho izany tsy misy hidiran’ny maha kandidà filoham-pirenena azy na tsia ny fanenjehana azy ankehitriny amin’ity raharaha kolikoly avo lenta ity. Izay no mahafetsy ny tomponandraikitra sasany eto amintsika. Lazaina fa fingampingana atao aminy ny fanenjehana azy amin’ny raharaha maloto mahavoasaringotra azy efa nandritry ny taona maro. Tsy menatry ny mialokaloka ao ambadiky ny politika rehefa sendran’ny patsa iray tsy omby vava.
Tsy izy irery anefa no enjehana ao anatin’ity raharaha ity fa olona enina izay efa nohenoina teny anivon’ny Cpac. Ireto avy izany olona enina izany : ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola tamin’ny andron’ny governemantan’ I Kolo Roger andriamatoa Jean Razafindravonona izay notanana am-ponja vonjimaika taorian’io fihainoana azy ny harivan’ny alarobia faha-21 marsa 2018 , andriamatoa Robimanana Orlando talen’ny Trésor tamin’izany fotoana izay nahazo fahafahana vonjimaika taorian’ny fihainoana azy tamin’io alarobia io, ramatoa Claudine Razaimamonjy izay namoahan’ny mpitsara teo anivon’ny Cpac fitanana am-ponja vonjimaika tamin’ity raharaha ity, “comptable” iray, tomponandraikitra amin’ny famoaham-bola iray na “ordonnateur secondaire” miasa eo anivon’ny ministeran’ny Vola sy ny Tetibola ary ilay ramatoa mpandraharaha iray naman’I Claudine Razaimamonjy , izay voarakitra ao anatin’ity “autorisation” ity koa ny anarany. Mitohy ny fanarahana akaiky ity raharaha ity.